Chii chinonzi Ethereum Code?
Iyo Ethereum Code ndeye kuputsa pasi, otomatiki cryptocurrency yekutengesa kunyorera. Iyi gore-based system yakagadzirwa naMarc Weston, wenguva yakareba, nyanzvi mutengesi uye iye zvino CEO wekambani yeduEthereum Code.
Marc, uyo pakutanga akashanda seakaunzi accounted kune rakakura pasoftware software, akafunga kushandura hunyanzvi hwake uye pachezvake nzira apo shamwari yakamuratidza kuti paive nedzimwe nzira dzekuwana budiriro yezvemari, kunyanya nekutengesa mari yemadhora. mukana wekutengesa cryptos uye aive akatsunga kutsvaga nzira yekubvisa iyo yakawanda purofiti kubva kune yakawanda ine mari yekutengesa mikana.
Padivi peshamwari yake, akashanda achigadzira sisitimu yaizobatsira vatengesi kuti vawane purofiti kubva kukurumidza kukwira kukosha uye kuwedzera kukosha kweiyo Ethereum cryptocurrency, pamwe nedzimwe mari zhinji dzedigital, mumisika yemari. Mhedzisiro mhedzisiro yaive mamiriro-e-iyo-e-e-uye anoshanda app - Ethereum Code- iyo yakabatsira vatengesi vepasirese kuwana mihombe purofiti kubva kune cryptocurrency nzvimbo.
Vhura Yemahara Akaundi Izvozvi
Marc Weston paakafunga kusiya basa rake uye kupinda mukutengesa kwe cryptocurrency, akakurumidza kuona kuti mari yedhijitari haisi iyo fashoni kana furo izvo vanhu vazhinji vari mumasheya kana misika yekudyara yavanoti ndizvo zvavari. Pane kudaro, iwo makuru ehunyanzvi hunyanzvi, hune mukana wekuenzana kana kutopfuura nzira zhinji dzechinyakare dzekubhadhara. Pamakuru madhijitari anowanikwa nhasi, maviri makuru ari Bitcoin neEthereum.
Ipo Bitcoin ichinyanya kuzivikanwa uye ichipayona iyo digital mari shanduko, Ethereum iri kukurumidza kubata, nekuda kwemamwe mashoma mikana. Kutanga, iri nani svikiro rekutsinhana uye zvakare inopa mukana wekubvumidza komputa kunyorera kumhanya pane yayo network. Mhedzisiro yacho ndeyekuti network yemari yakatungamira mukuvandudzwa kwemapurogiramu uye zvibvumirano zvakangwara, nepo mari yayo yemukati ichizivikanwa seEther. Kunze kwekutengesa cryptocurrency, Ether inoshandiswa zvakare nevagadziri vekubhadhara kubhadhara mari yekutengesa uye masevhisi pane Ethereum network. Marc akaziva kugona kukuru kwaive naEthereum uye akashandisa izvi sehwaro hwekukura kwake.
Iyo Ethereum Code bot inogonesa ese marudzi evatengesi kuti vapinde pane iyo cryptocurrency yekutengesa chiito. Imwe bhenefiti yakakura ndeyekuti iwe haufanire kuve neruzivo rwekutanga kuti ushandise iyo Ethereum Code - neapp iyi ine simba, unokwanisa kuwana akasiyana siyana madhijitari edzidzo zviri nyore, zvichiita kuti iwe upinde munhandare yekutengesa ye cryptocurrency nechivimbo uye nematurusi kubudirira.
Sei Ethereum Code Bot Inoshanda
Uchishandisa iyo Ethereum Code app iri nyore kuita - danho rekutanga kuvhura account yemahara. Kunyoresa kuaccount nyowani kuri nyore uye zvinongoda kuti iwe upe ruzivo rwekutanga pane fomu rewebhu kumusoro kwepeji rino kana papeji redu rekutanga. Kana ruzivo rwako rukasimbiswa uye rwatenderwa, iwe unobva wakwanisa kumisikidza yako Ethereum Code account uye kutanga kutengesa. Yedu software ichatora yakanakisa broker iwe kuti uve nechokwadi chakanyanya purofiti.
Chimwe chinonyanya kufadza maficha eXXFNxxx ndechekuti bot inosangana musone kusarudzo yedu yevanosarudza broker, vachiibvumira kuisa maodha pachinzvimbo chako otomatiki. ita chero chinhu. Iyo yepamusoro algorithm ichakurumidza kunongedza mikana inobhadharisa yekutengesa uye ichaita kutengeserana otomatiki.
Mukuwedzera, sewebhu-based trading system, unogona kutanga kutengesa pakarepo sezvo iwe usingadi kutora kana kuisa chero software yakakosha pane kombiyuta yako. Zvese zvaunoda ikombuta kana nharembozha ine yakagadzikana Internet kubatana uye yazvino browser kuti upinde mune yako yekutengesa account. Kugadzira zvaunofarira zvekutengeserana, zvakadai seKurega Kurasikirwa, hukuru hwekutengesa uye Tora Profittakes chete masekonzi mashoma, zvinoreva kuti iwe unogona kutanga kuita mari yekutengesa macrypto mari nguva pfupi paunenge uchinyora.
Ita Mega purofiti Kutengesa Crypto Zvoga
Iyo Ethereum Code App ichakubatsira iwe kutanga kuita purofiti, kunyangwe iwe usati wambotengesa kare. Izvi zvinodaro nekuti ine inorarama yekutengesa sisitimu iyo inosangana kune vakakurumbira Ethereum brokers uye nzvimbo nzvimbo dzekutengesa iwe, zvizere pane autopilot. Robhoti redu harirari, haritore mazororo kana kuenda kuzororo pakupera kwevhiki - imushini usingaregi purofiti unoshanda iwe 24/7.
Sezvo yedu app ichiita kushandisa yepamusoro-soro algorithm kuongorora maitiro emusika uye kungoisa otomatiki mabasa anotengesa panzvimbo yako, kana zvasvika kune purofiti iwe yaunogona kuwana, hapana muganho wemarii yaungagone kuburitsa uchishandisa Ethereum Code.
Uyezve, kupinda kune yedu application hakuna mahara zvachose. Iwe haufanirwe kubhadhara kubhadhara kusaina kana kuwana iyo system. Uye zvakare, hapana chakavanzika mhosva kana mutero unobhadhariswa kuaccount yako, saka iwe unosvika pakuchengeta 100% yezvaunoita uchitengesa cryptocurrencies nesu.
Zviri Pamutemo Kushandisa Ethereum Code App?
Kushandiswa kweiyo Ethereum Code app hakusi kwepamutemo chete asi kuri kunyatsokurudzirwa nevatengesi nevanoongorora mumusika we cryptocurrency. Mukushambadzira kwemari, vanhu vazhinji pavanotengesa, zvirinani kune wese munhu, nekuti musika mutete unoreva kushomeka kushoma uye purofiti shoma kune vatengesi. Sezvo iyo Ethereum Code ichibatana kune vane mukurumbira kwazvo cryptocurrency brokers uye ichitevera mahunyanzvi maekisheni, inonyatso kutarisirwa muindasitiri semugadziri mukuru wemusika kana zvasvika kune Ethereum uye nemamwe ma cryptocurrencies.
Wakamirira chii? Saina Chikumbiro cheYako Ethereum Code Akaunti Nhasi!
Kutengesa kuburikidza neinotungamira otomatiki system senge Ethereum Code inogona kuratidza kukosha kwauri mumusika we cryptocurrency. Chokwadi ndechekuti, haugone kuwanikwa 24/7 kuti uite kumusika nekufamba kwayo, zvichireva kuti pamwe urikushaiwa mimwe mikana yepamusoro yekutengesa. Kuwedzera pamusoro, kana iwe ukasarudza kupinda mukutengesa wega, kutengesa kunobatsira kunoda nguva yakawanda, ruzivo uye ruzivo, izvo zviri hunhu hunowanikwa nevatengesi vashoma. Ethereum Code inokuitira rese basa, saka hauchadi kupedza maawa uchinzwisisa uye kuongorora misika yezvemari uye zvakasiyana zvinhu. Uye zvakare, yedu bot inokupa iwe kukundikana-safes, senge Stop Loss uye zvimwe zvinhu zvisingawanzo kuwanikwa pane kuchinjana uye mamwe ma broker mapuratifomu.
Wakagadzirira kuisa mari pane iyo Ethereum uye cryptocurrency wave uye kujoina boka redu riri kukura revashandisi vanogutsikana, vanobatsira?
Nyoresa account nhasi!